January 21, 2021 - ApannPyay Media
အိမ်ဆောက်ရင် သိထားရမယ့် လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ သစ်ဆက်နည်းအကြောင်း အိမ် တအိမ်မှာ စီးပွားပျက်ပြီး လူသေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးတဲ့ ပင်လယ်ကူးသစ် လို့ခေါ်တဲ့ အကြောင်း အဲ့ဒါ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်လယ်ကူးလို့ခေါ်တယ်… အ လွန် ခိုက်ပါတယ်.. အိုက်အိမ်မှာ နေသူများ စီးပွားမဖြစ်တတ်ဘူး။ လူသေသည် အထိအောင် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သစ် ကို ဆက်တဲ့နေရာဟာ တိုင်ရှိရင် ဆက်လို့ ရပါတယ်။ တိုင်မရှိပဲ ဆက်ထားရင်တော့ ကျိမ်းသေ ပင်လယ်ကူးအိမ် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှိနေခဲ့ရင် ချက်ချင်းသာ ပြင်ဖို့လုပ်ပါလေ။ နောက်.. အိမ် ပု ခက်လွှဲဆိုတာ ရှိသေးတယ် ခေါင်းရင်း အိမ်နဲ့ ခြေရင်းအိမ် ဟာ အမြင့် တူနေပြီး အလယ်အိမ်က ပုနေရင် အိမ် … Read more
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာကလူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ ပွဲတောင်ကြည့်ချင်သွားတယ် ဇာတ်ပွဲတွေမကြည့်ရတာတောင်ကြာပြီ ဖရဲသီးသယ်တွေရော ဓာတ်မီးထိုးပြတဲ့လူတေရောစုံစိလို့ အားပေးလိုက်ကြပါအုံးနော် လူပြည်ဆိုတာ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့ ရဖို့ခဲယာဉ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝမှာ ကုသိုကောင်းမှုတွေလည်းလုပ် စားဝတ်နေရေး လူမှုရေးတွေနဲ့ နေ့စဉ်နပန်းလုံးနေရပီး အဆင်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိသလို အဆင်မပြေမှု ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာလည်း လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ကြရတာ ဓမ္မတာပါ။ အဲလို စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်သောကရောက် စိတ်ထိခိုက်စရာဆိုတာတွေကို မေ့ပြစ်ပီး ရခဲလှတဲ့လူဘဝကြီမှာ ပျော်ချိန်မှာပျော်လိုက်မယ် စီးပွားရှာချိန်စီးပွားရှာမယ် တရားရှာချိန်မှာ တရားရှာမယ်ဆိုရင် အပြည်စုံဆုံးဘဝမဟုတ်တောင်မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဘဝလို့ဆိုရင် မှားမည်မထင်ပါ။ အခု ဒီဗွီယိုထဲမှာတော့ တောရွာက လူငယ်လေးများမှ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်ကပြနေကြတာ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ ကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ။ တကယ်တော့ အပျော်ဆိုတာ ဘာတေရှိမှ ညာတေရှိမှဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိအချိန် လက်ရှိအခြေအနေမှာ … Read more
ကိုဗစ်ပညာပေးသီချင်းနဲ့ မြန်မာတင်မက အာရှအထိပေါက်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်မချောချောလေး ကိုဗစ် ပညာပေးဗီဒီယိုလေးနဲ့ ဆရာဝန်မလေး အက မြန်မာနိုင်ငံသာမကပဲ အရှေ့တောင် အာရှမှာပါ နာမည်ကြီးနေ ရုပ်သံတစ်တော့တွေမှာ ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပီး မြန်မာနိုင်ငံသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပရိတ်သတ်တွေရှိထားတဲ့ ဆရာဝန်မချောချောလေးကတော့ ဒေါက်တာ လော်ရယ်ဘဲဖြစ်ပါတယ် ကိုဗစ် ၁၉နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေး ဖျော်ဖြေရာမှာ လူသိများ သွားခဲ့တဲ့ Net Idol, PAN Aesthetics ရဲ့ CEO, Dr.Laurel နှင့် ခဏတာ တွေ့ဆုံခြင်းကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် Go Corona သီချင်း ကို အက Performance လေး နဲ့ Online မှာ တင်ဆက်ပေး ခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တင်မကဘဲ အရှေ့တောင် အာ ရှ … Read more
ငွေဝင်ယတြာမီးတိုင်(တင်ဖူးပေးပြီး အသူံးတည့်တာကြောင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်) ဒီတခါတော့ စီးပွားလာဘ်ပွင့် ငွေဝင်မီးတိုင် စီရင်နည်းကို ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်…. ကိုယ်တိုင် စီရင်အသုံးပြုတဲ့ နည်းဖြစ်သလို လက်တွေ့စီရင်အောင်မြင်နေကြဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စွာ သူံးစွဲနိုင်ပါတယ် …… စီရင်နည်း အနေနဲ့ကတော့ မိမိ လက်ဝါးအရှည်ထက်မလျော့တဲ့ မိးတိုင်မှာ စီရင်ရမှာပါ …. ပုံပါအက္ခရာများ အတိုင်း ရေးသားစီရင်ရပါမယ် … အက္ခရာ တလုံးဆွဲတိုင်း ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အစအဆုံးရွတ်ဖတ်ရပါမယ် ….. အက္ခရာ လေးလုံး ရေးသားပြီးပါက မီးတိူင်ကို …. “ဥုံ သိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ မဟာသိဒ္ဓိ အပေါင်း ထောင်သောင်း ထက်ဆရာထက် ” ထို မန္တာန်ကို ၉ ခေါက် ၃ ကြိမ် ရွတ်ဖတ်ရပါမယ် ….. အလုံးစုံ စီရင်ပြီးပါက … … Read more
အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းရောဂါကင်း သာမန်ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ နောက်ကျောတက်၊ ခါးနာ၊ ခြေထောက်ကိုက်ဖြစ်ရာကနေ တစ်စတစ်စနဲ့ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေငန်းရောဂါ၊ မျက်စိမှုန် ပါဝါတိုး၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ အကြောတက် စသဖြင့် ရောဂါဟာ ကြီးထွားလာတတ်ကြပါတယ်။ဒီလို လူတိုင်းအဖြစ်များနေတဲ့ရောဂါများဟာ ပထဝီဓါတ်နှင့် ဝါယောဓါတ်တို့ မညီမျှရာကနေစပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေပါပဲ။ အထက်ပါရောဂါများ မဖြစ်ရလေအောင်၊ ဖြစ်ပြီးသူများလည်း ရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းအောင် အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းခြင်းဟာ ရှေးမြန်မာဆေးကျမ်းများနှင့် ရှေးအိန္ဒိယဆေးနည်း၊ တရုတ်ဆေးနည်းများတွင်လည်း ဖော်ပြထားကြပါတယ်။လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသူများလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။ (၁) ခြေအသင့်နင်းနိုင်မည့် အုန်းမှုတ်ခွက် (၂)ခုကို ပရဆေးဆိုင် သို့မဟုတ် အုန်းသီးဆိုင်တို့မှာ မေးဝယ်ပါ။ (၂) အုန်းမှုတ်ခွက် (၂)ခုကို မှောက်လျှက်ထားပြီး ကိုင်စရာဝါးတန်း သို့မဟုတ် ကြိုးတန်း လုပ်ထားပါ။ (၃) အုန်းမှုတ်ခွက်ပေါ်ကို ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက တက်နင်းပြီး … Read more
အမျိုးသမီးတို့ လွဲနေသော ဘုရားမှာလှူတဲ့ ဆံပင်အလှူ
အမျိုးသမီးတို့ လွဲနေသော ဘုရားမှာလှူတဲ့ ဆံပင်အလှူ အရှင်ဘုရား။…တပည့်တော်မသည် ဆံပင်ရှည်များကို ဘုရားမှာလှူမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အရှည်ထားပါသည်။ ယခု ဆံပင်ရှည်၍ ဖြတ်ပြီးလှူမည်လုပ်ရာ အချို့က ဆံပင်အတိုင်း မလှူကောင်း ရောင်း၍၊ သို့မဟုတ်-ဘုန်းကြီးသုံး ယပ်လုပ်၍ လှူရသည်ဟု ပြောပါသည်။ မည်သို့လှူသင့်သည်ကို ဖြေကြားပေးပါရန် လျှောက်ထားပါသည်ဘုရား… ( ဖြေ )။ ဆံပင်မှာ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ ပေါက်ရောက်သော အရာဝတ္ထုဖြစ်ကာ အမွေး-ခြေသည်း-လက်သည်း-သွား-အရေပြား- တို့နှင့် အတူ တစပဥစကအဝင် ဇေဂုစ္ဆ-သဘောတရားဖြစ်၍ သူတော်ကောင်းတို့ စက်ဆုပ်အပ်သော အရာဝတ္ထုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးတို့အဖို့ အမွန်အမြတ်ဖြစ်သော်လည်းရတနာသုံးပါး၌ ဆံပင်အတိုင်း ဆွဲချိတ်လှူဒါန်း၍လည်း တင့်တယ်မှုမရှိပါ။ လူ့ဆံပင်ကို ယပ်စသည်လုပ်၍ လှူဒါန်းရိုးလည်း မရှိပါ။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ဆံပင်ကောင်းသော အမျိုးသမီးတဦး ဆံပင်ကိုဖြ တ်၍ ရောင်းချရရှိသည့်ငွေဖြင့် အရှင်ကစ္စာယန-စသော ရဟန္တာရှစ်ပါးအား … Read more
အိမ်တွင်းမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာ (၆) မျိုး သင့်အိမ်မှာ ဒီအရာတွေရှိနေရင်တော့ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါ သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား။ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား။ အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလိုရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး/ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ … Read more
လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတစ်ရပ်ကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် နေစရာအိမ ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် (တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့သိမ်းထားခဲ့တာပ ါ။အခုခေတ်မှာ လုပ်ဖို့မပြောနဲ့သိသူတောင်နည်းသွားပြီ။) ဆရာကြီးဒဂုန် ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း တွေ့မိလို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမ်ဆောက်ရင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြင်လဲမြင်ဆရာ ပါ။သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နေစရာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဝေဒင်္ဂတို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ စား-ဝတ်-နေ-ရေး ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။အဲဒီ စား-ဝတ်-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးခွန်းဟာ နှုတ်ကပြောရာမှာ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် သေသေချာချာ တွေးကြည့်လေ လေးနက် ကျယ်ပြန့်လေပါပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှမစားလို့ မဝတ်လို့၊ မနေလို့ ရလို့လား၊ မစားဘဲ၊ မဝတ်ဘဲ၊ မနေဘဲ ရနိုင်ရိုးလား။ ရှာရ၊ ဖွေရ၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာ၊ မပြောချင်၊ မဆိုချင် မဆက်ဆံချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ … Read more
အသီးပဲစားနေကြတာ အရွက်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးတာ လူတွေသိပ်မသိကြဘူး
အသီးပဲစားနေကြတာ အရွက်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးတာ လူတွေသိပ်မသိကြဘူး မာလကာအရွက် အိမ်မှာစိုက်ထားရင် သင့်အိမ်ဟာ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေပါပြီ ဘယ်လိုတွေ အသုံးဝင်လဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် မာလကာအရွက်ဟာ ခံတွင်းနံ့ဆိုးတဲ့သူတွေ သွားပိုးစားလို့…အစာဟောင်းတွေ ညှပ်နေရာက အနံ့ဆိုးတွေ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အနံ့ဆိုး အရက်သောက်လို့ ထွက်တဲ့အနံ့ဆိုး ရှိတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ် ခံတွင်းနံ့ဆိုးရှိသူတွေအတွက်…ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် အရွက်ကို ရေဆေး ဝါး လိုက် ပြီး ထွေးထုတ်လိုက်ရုံ မွေးပျံ့တဲ့ရနဲ့ ခံတွင်းကို ပြန်ရစေနိုင်ပါတယ် သူ့အရွက်က အဆီက ခံတွင်းနံ့မွေးအောင် စွမ်းနိုင်လို့ပါပဲ ခံတွင်းနံမွေးတော့စကားပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရနိုင်ပါတယ် မဟီဒွန် တက္ကသိုလ်က စမ်းသပ်ချက်အရ မာလကာရွက်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခံတွင်းဆေးရည် သုံးတဲ့ အယောက် ၇၀ ဟာ သားဖုံးယောင်တာတွေကို ပြန်လည် သက်သာစေပါတယ်တဲ့ သွားဖုံးယောင်တာ သွားကိုက်တာတွေကို … Read more
အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆိုတာ ပြသနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) မျိုး
အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆိုတာ ပြသနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) မျိုး အာရုံကြောအားနည်းနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) မျိုး နေကောင်းလားမေးရင်နေကတော့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုနားက တခုခုဖြစ်လိုက်၊ ဒီနားကတမျိုးဖြစ်လိုက်နဲ့ ဘာရောဂါအမျိုးအမည်တပ်ရမှန်းမသိအောင် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်၊ ဆရာဝန်သွားပြရင်တောင်ပြောပြရခက်တဲ့ လက္ခဏာအစုံတွေ ကိုယ့်မှာရှိနေတာမျိုး။ လူ့ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အာရုံကြောစနစ်ဟာ တကိုယ်လုံးကိုဖြန့်ကြက်ထားတာမို့ အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုကအစ ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်တွေအထိကို သက်ရောက်မှုကြီးမားတာမို့ အာရုံကြောစနစ်ကျန်းမာနေဖို့ လိုပါတယ်။ အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆို လူက တကယ်ကိုပေါက်ကရတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိင်စွမ်းတွေထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောအားနည်းရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်လဲ ထုံကျဉ်တာ ခြေတွေ၊လက်တွေ ထုံကျဉ်တာဖြစ်ဖူးတယ်မလား။ ရာသီဥတုအေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘဲ မကြာခဏ ထုံကျဉ်တာနေရခက်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 အားနည်းခြင်းက အာရုံကြောတွေကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ အကာအကွယ်အလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ Crohn’sရောဂါ သို့မဟုတ် တခြားအူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဗီတာမင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပိုချမ်းတတ်တာ အရင်ကဆို မှုလောက်မှာမဟုတ်တဲ့ အအေးဓါတ်လောက်ကို အခုမှအရမ်းချမ်းတတ်နေတာမျိုး။ နည်းနည်းအေးတာနဲ့ ကိုယ်က … Read more